Xog-warran: 4 dowladood oo cadaawad u arka guusha Farmaajo? - Caasimada Online
Home Warar Xog-warran: 4 dowladood oo cadaawad u arka guusha Farmaajo?
Xog-warran: 4 dowladood oo cadaawad u arka guusha Farmaajo?
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa magaalada Muqdisho 8 Bishan ka dhacay Doorasho taariikhi ah oo ay soo dhaweeyen dhammaan Shacbiga Soomaaliyeed ee ku nool dal iyo dibad.
Doorashadaani ayaa Somalia ku muteysatay cadaawad hor leh oo ay u qaaden Dowlado dhowr ah oo gumaad dadban ku hayay Somalia tan iyo markii ay dhacday Dowladii Dhexe ee Somalia.